बियर मार्ग - ट्रेन द्वारा युरोप मा सबै भन्दा राम्रो Beers | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > बियर मार्ग – ट्रेन द्वारा युरोप मा सबै भन्दा राम्रो Beers
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 25/01/2021)
तपाईं आफ्नो आवेग लिन देख एक बियर प्रेमी होस् सडक वा तपाईंले पहिले नै मा युरोप एक यात्रा पुस्तकहरू, यस मा एक नजर ट्रेन द्वारा बियर मार्ग – ट्रेन द्वारा युरोप मा सबै भन्दा राम्रो Beers. तपाईं निराश गरिनेछ! अझ राम्राे, हाम्रो सुझाव को हरेक एक सजिलै रेल द्वारा पुगेपछि. कुनै ड्राइभिङ आवश्यक, जो कुनै चिन्ता अर्थ. रमाइलोको!
बियर मार्ग रेल – युरोप मा सबै भन्दा राम्रो Beers: मा ट्रेन स्टेशन!
एउटा चीज जुन तपाईंले महसुस गर्न सक्नुहुन्न त्यो एक राम्रो बियर हो ट्रेन मार्ग धेरै पाउन सकिन्छ रेलवे स्टेशन. को शेफील्ड ट्याप सबै भन्दा राम्रो को छ, बारेमा सुविधा 30 Casks र मस्यौदाहरू - जो केही स्थानीय र अपेक्षाकृत अस्पष्ट Breweries चुनेको हाइलाइट. तपाईं रेल मा प्राप्त र जाने तिनीहरूलाई केही भ्रमण सक्छ ... वा राख्नु रहन र तिनीहरूलाई नमूना थप समय खर्च. कति चिसो?!
बियर मार्ग रेल – युरोप मा सबै भन्दा राम्रो Beers: ब्रसेल्स मा delirium गाउँ, बेल्जियम
अब, यो म व्यक्तिगत म ब्रसेल्स भ्रमण र मेरो पति पाउन एक मिशन मा थियो जब पनि गरिएको छ कि छ युरोप मा सबै भन्दा राम्रो Beers. सुझाव: को गुलाबी हात्ती पालन!
म मूल हुँ दक्षिण अफ्रिका ब्रसेल्स भ्रमण गर्दा र एक सानो गृह बिरही महसुस भएको थियो. त्यसैले, म घर देखि एक महल लाइट आदेश. को पाठ्यक्रम, तिनीहरूले स्टक मा थियो! यो कुनै आश्चर्य रूपमा छ delirium क्याफे यसको लामो जानिन्छ बियर सूची, उभिरहेको 2,004 जनवरी मा विभिन्न ब्रान्डहरु 2004 को रेकर्ड गरिएका रेकर्ड को गिनीज बुक. प्रस्तावको बियर देखि हो 60 देशहरूमा!
पट्टी Impasse डे ला Fidelite / Getrouwheidsgang भनिन्छ सानो गोरेटो मा स्थित छ, केवल एक को बाट सय मीटर को जोडी महान् स्थान. को Jeanneke Pis मुर्ति प्रवेश देखि सडक मार्फत छ.
पट्टी नाम बियर आउँछ delirium Tremens, जसको गुलाबी हात्ती प्रतीक पनि क्याफे प्रवेश decorates.
रेल स्टेशन एक छ 10 को बाट मिनेट पैदल क्याफे, त्यसैले यसलाई यो छ कुनै आश्चर्य छ ट्रेन द्वारा बियर मार्ग – युरोप मा सबै भन्दा राम्रो Beers.
बियर मार्ग रेल – युरोप मा सबै भन्दा राम्रो Beers: मा तिमीहरूले ओल्डे Cheshire चिज लन्डन, इङ्गल्याण्ड
हामी यो आउँछ इतिहास प्रेम पिउने यात्रा. इमानदार, यो पब यसको छिमेकी केही तुलनामा सबै भन्दा ठूलो चयन छैन. तर यो मात्रा मा के अभाव यसलाई आफ्नो गुणस्तर इतिहास संलग्न संग अप बनाउँछ. पौराणिक कथा यो एक पब गर्नुअघि भिक्षुहरूले साइटमा पीसा कि यो छ. शमूएल जनसन र चार्ल्स डिकेंस यहाँ पिए, त्यसैले तपाईंले यो बिसौनीमा इतिहास संग एक उमालेर बनाउनु साझा गरिनेछ.
स्थापना हाल स्वामित्वमा छ Sam स्मिथ पुरानो भठ्ठी. आफ्नो पबहरूमा सुन्दर भवनहरु लागि जाने-हो, परम्परागत एल्स, र आरामदायक अंदरूनी. कुनै ठूलो ब्रान्ड, TADCASTER आफ्नै भठ्ठी देखि बस शानदार प्रसाद, yorkshire.
बियर मार्ग रेल – युरोप मा सबै भन्दा राम्रो Beers: Pilsen मा Pilsner Urquell भठ्ठी, चेक गणतन्त्र
को भठ्ठी देखि आधुनिक छ हुनत 1993, कि रहने उमेर बढन Cellars को माइल भूमिगत भ्रमण को भाग हो. एक भूमिगत र्याम्बल खुला लकड़ीको किण्वनमा समाप्त हुन्छ र प्रकारको विशाल काठको ब्यारेलको जोडी जुन सबै पिल्स्नर अर्क्वेलको उमेरका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो।.
सुपर बैरल लहरै को पिच देखि बियर छ, एकदम बस, सबै भन्दा राम्रो lager बियर हामी कहिल्यै स्वाद छ. र तपाईं आफै लागि बाहिर यो परीक्षण गर्नुपर्छ! को Pilsner Urquell भठ्ठी एक अद्वितीय भ्रमण लिन निम्तो. तपाईं हुनेछ अनुभव ऐतिहासिक Cellars मा साहसिक र मनोरञ्जन, यस मदिरा प्रक्रियाको बारेमा सिक्न र उत्कृष्ट lager स्वाद, को पाठ्यक्रम!
बियर मार्ग रेल – युरोप मा सबै भन्दा राम्रो Beers: जर्मनी (नहीं म्यूनिख)
हामी एक गोप्य मा तपाईंलाई गरौं सक्नुहुन्छ? जर्मनी मा सबै भन्दा राम्रो बियर छ छैन मा म्यूनिख. जर्मनी असाधारण बियर को एक विशाल विविधता छ. देश को पनि धेरै दैनिक Brews आश्चर्यजनक राम्रो. तर हरेक बियर उत्कृष्ट हुन सक्छ, जहाँसम्म बियर एक पौराणिक कथा हो. तपाईं किसिम को खोज गर्दै छन् र तपाईं वर्ण र sizzle आफ्नो बियर मन, आफैलाई एक अनुमोदन गर्न र भ्रमण योजना बभेरियन ब्याककन्ट्रीमा, जहाँ बियर को भाग हो स्थानीय संस्कृति र बताउन कथाहरू संग वास्तविक मानिसहरूले पीसा छ.
कोलोन फ्रैंकफर्ट गाडिहरु गर्न
म्यूनिख फ्रैंकफर्ट गाडिहरु गर्न
हानोवर फ्रैंकफर्ट गाडिहरु गर्न
हैम्बर्ग फ्रैंकफर्ट गाडिहरु गर्न
कम Bavaria – Niederbayern
म्यूनिख को पूर्व गर्न इलाका यस खण्डका मार्फत विस्तार Bavarian वन को अष्ट्रीया र चेक borderlands र जर्मनी को कम से कम यात्रा क्षेत्रहरु मध्ये एक छ. त्यो एक्लै तल्लो Bavaria आकर्षक बनाउँछ गन्तव्य, तर इतिहास र बियर को संस्कृति यसलाई अझ आकर्षक बनाउन.
सत्तरी एक सानो र मध्य आकारको ब्रुवरी Bavaria यस भाग मा सञ्चालन. तिनीहरूलाई केही 1400s फिर्ता तिथि. एघार तिनीहरूलाई को थिए त द्वारा स्थापित चर्च, द्वारा चलान monasteries, वा स्वामित्व nobility. तीन अझै पनि जर्मन barons द्वारा संचालित छन् र एक संसारमा सबैभन्दा पुरानो अभय भठ्ठी छ. कम Bavaria एक लुकेका खजाना छ यो बियर आउँदा.
युरोप मा सर्वश्रेष्ठ Beers प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? (पाठ्यक्रम Responsibly!) त्यसपछि आफ्नो यात्रा बुक एक ट्रेन सेव कुनै peaky लुकेका छन् शुल्क, जो बियर लागि थप पैसा अर्थ!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-beers-route-europe%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#बियर #BeerinEurope #बियर भालु यात्रा travelbytrain